डरको डर ~ brazesh
September 26, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट3comments
"हिजो राती एउटाले मेरो गाडीमा मोबाइल सेट नै खसालेर गयो नि !"
"ए हो ? खै त देखा, हेरौँ हेरौँ कस्तो रहेछ ?" अर्का चालक उत्सुक भए।
"नोकियाको राम्रै सेट थियो। तर, त्यसले पछि फोन गर्‍यो, मैले बोलाएर फिर्ता दिएँ।" "कस्तो मूर्ख रहेछ ! खुरुक्क सिमकार्ड निकालेर बेच्द्या भए भइहाल्थ्यो नि !"
"आ... के त्यति जाबोमा आफ्नो जात फ्याल्नू !" फिर्ता दिनेले भने।
"जाबो पाँच-सात हजारको सेट खाएर के गर्नू ?"
"टाढाटाढा गइरहनुपर्छ टि्रप लिएर। मेरो सेट खाने मोरा मरजिाओस् भनेर सराप्यो भने के गर्नू ? तथास्तु भनेको बेलामा परेर गाडी त्रिशूलीतिर खस्यो भने बेक्कारमा !" सबै जना गललल्ल हाँसे।
'नबिराउनू, नडराउनू' भन्ने उखान हामीलाई सुनाइन्छ तर त्यसैको पछाडि पनि बिरायो भने के हुन्छ भन्ने कुराको डर लुकेको हुन्छ। मान्छे डराउनुपर्छ। हरेक मान्छे डराउँछ। डरले नै मान्छेलाई राक्षस बन्न दिँदैन। डरले नै मान्छेलाई सत्कर्म गर्न लगाउँछ। डरले नै मान्छेलाई पाप गर्नबाट रोक्छ, अपराध गर्नबाट रोक्छ। डर नहुने हो भने मान्छे मान्छे रहँदैन। उसले अरूका लागि सोच्दैन। अरूको भलो गर्दैन। डर नहुने मान्छे चिसो हुन्छ, भावना र संवेदना नभएको पत्थर हुन्छ डर नभएको मानिस। सायद यही कुरा थाहा भएर नै प्रकृतिले मान्छेमा डराउने तत्व हालेको हुनुपर्छ। सायद त्यसै भएको हुनाले मान्छेको चेतनाको विकाससँगै विभिन्न धर्मका नाममा पनि व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक आचरणका नालीबेलीहरू बनेका होलान्।
Ambika November 13, 2010 at 12:02 AM
Luna November 22, 2010 at 9:29 AM
"डरलाई जितेर कुकर्म गर्नेहरू आफैँले जितेको डरसँग डराएर बस्नुपर्छ। त्यसैले, अन्ततोगत्वा डराउनैपर्छ भने पहिले नै डराएर मानिसले सत्कर्म किन नगर्ने ?"
s malla March 29, 2011 at 11:33 PM